Thenga iTransvar powder (4642-95-9) hplc =98% | AASraw
/ iimveliso / abanye / Trenavar powder (4642-95-9)
Akukho kalo SKU: 4642-95-9. Udidi: abanye
I-AASraw inokubaniswa kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya ku-mass order ye-Trenavar powder (i-4642-95-9), phantsi komgaqo weCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
Trenavar powder eyaziwa ngokusemthethweni njenge-Estra-4,9,11-triene-3,17-dione, kunye ne-Trendione kwaye i-10 amaxesha amaninzi kwaye androgenic kuneTestosterone. I-Trenavar iyiprohormone egxile kwi-17b-HSD1 ukwenza i-Trenbolone esebenzayo, nto leyo ithetha ukuba kanye emzimbeni wakho uTrnavar uguqula kwiTrenbolone okanye eTren.
Trenavar powder ividiyo
Trenavar powder Abalinganiswa basisiseko
igama: Trenavar powder
I-molecular Formula: C18H20O2
Isisindo somzimba: 258.36
umbala: I-powder ephuzi emhlophe okanye emhlophe
Amagama eKhemikhali: I-Estra-4,9,11-triene-3,17-dione
Amanye amagama: i-Trendione, i-Trenabol, iTren Elite, i-T-Var i-15 ne-Super Trenabol.RU-2065, i-Trenava irpowder, iTrendione powder
Ukusetyenziswa kwePernavar powder
I-Trenavar powder iyaziwa ngokusemthethweni njenge-Estra-4,9,11-triene-3,17-dione, kunye ne-Trendione kwaye i-10 amaxesha amaninzi kwaye androgenic kuneTestosterone. I-Trenavar powder eluhlaza ngumprohormone egxile kwi-17b-HSD1 ukudala i-Trenbolone esebenzayo, ithetha ngokukodwa emzimbeni wakho Trenavar powder eluhlaza uguqulelwa kwiTrenbolone aka Tren. Abasebenzisi basePrnavar bafumana amaxabiso amaninzi okwandiswayo kunye nobukhulu. Abasebenzisi nabo bafumana ukuphulukana nokulahlekelwa kweoli kunye nokwanda kweethambo. I-Trenavar i-powder compound iye yafumana ukunyuka kwamanani kunye nokufuna ngenxa yeziphumo zayo ezinamandla kwimigangatho emfutshane. Eyona nto iyona nto ibhetele kwihlabathi zomhlaba xa ubona ubungakanani bokuba ubunzima obufumeneyo kunye namafutha alahlekile.
I-Trenavar powder eluhlaza, eyaziwa nangokuthi yi-Trendione, iprohormone yomlomo eyahlukileyo kwi-steroid trenbolone ejoyiweyo kuphela nge-ketone kwisikhundla se-17th. Ngako oko, ivelisa i-trenbolone esebenzayo emzimbeni, eyenza ibe yinto enamandla kakhulu kwaye inamandla kakhulu. Ekubeni ifana neyokwakheka kwi-trenbolone, ngaphandle kwesohlwayo se-tren (esivame ukuba ngumphumela wokungena kwi-vein ngengozi), umsebenzisi kufuneka abe nemiphumo efanayo efanayo nokusebenzisa i-trenbolone injectable.
Le prohormone yenza ngokukhawuleza ukuba abasebenzisi bangenele ukuba bakwazi ukufumana iziphumo nje emva kwe-7 kwiintsuku ze-10 emva kohlobo lokuqala lwe-Trenavar powder. Nangona kunjalo, i-downside kuphela i-Trenavar ipowder eluhlaza inganciphisa amanqanaba akho okunyamezela, okwenza kube nzima ukuba uhlale uhlala ixesha elide njengoko unako xa uthatha i-cardio exercises.
Ngoku ngoxa i-Trenavar powder ithathwa njengeprohormone ekhethekileyo, inokwabelana ngezinto ezininzi ezifanayo neTrenbolone, i-steroid enejectject eninzi inabalandeli emhlabeni jikelele. Oko kuhlukanisa ezimbini ukusuka komnye nomnye kukuba i yangaphambili i-ketone kuphela kwisikhundla se-17th kude neyokugqibela kwizakhiwo zamakhemikhali.
Yiyiphi imilinganiselo yePernavar powder
Uninzi lwabasebenzisi bahamba malunga ne-30 ukuya kwi-45mg ye-Trenavar imihla ngemihla yeentsuku ze-30 kunye nenkxaso yenkxaso. Kukulungele ukwahlula le doji phezulu kwe-2 kwi-3 servings ye-15mg ngosuku.
Ekuqaleni, i-trendione kufuneka ifakwe kwi-50-70 milligrams (mg) ngosuku lokwahlukana kwemitha xa ihamba yodwa, kwaye ukuba iziphumo ezingekho, i-dosage inganyuswa ibe yi-100mg. Akukho mfuneko yokugqithisa loo mali, kwaye akufanele iqhutywe ixesha elide kuneeyure ze-5 okanye ze-6.
Ukuba isetyenziswe njengenxalenye yecingo, kucetyiswa ukuba usebenzise i-trendione ukukhahlela umjikelo, kwaye umthamo omncinci we-20-50mg ngosuku lokwahlula ngumlinganiselo ophezulu. Abasebenzisi abaninzi bakhetha ukubeka i-equipoise, i-testosterone, okanye i-primobolan nayo. Ngaphezu koko, abanye abasebenzisi banokukhetha ukubeka i-trendione kunye ne-deca durabolin, kodwa khumbula ingqalelo ukuba ukufakwa kwemigangatho emibini ye-progestin kufuneka kwenziwe kuphela ngabasebenzisi abanolwazi.
Xa usebenzisa i-trendione ngokokuqala ngqa, kufuneka iqhutywe yodwa kwinani elincinci ukuze ubone indlela osabela ngayo.
Indlela iPernavar powder isebenza ngayo
I-Trenavar ipowusi eluhlaza isebenza ngokujolisa kwi-17b-HSD1 kwaye i-hydrogenates i-compound ibe yinto yokuguqula ngaphakathi komzimba wakho kwi-trenbolone. I-Trenbolone kunye nePernavar powder zifana kakhulu, eqinisweni zikwabelana ngokufanayo kwi-3 efanayo. I-Trenavar powder eluhlaza ihluke kwi nyaniso yokuba ine-17 ketone. Njengokuba umphumo wabasebenzisi bafumana amava malunga nemiphumo efanayo abaya kuyenza ngomjikelezo we-trenbolone.
Abasebenzisi bathabatha ukwanda ngokukhawuleza kwimizimba yabo yamandla kunye namandla kuwo wonke amabhodi, kunye nokuzuza okuqala ukuba kwenzeke kwiintsuku ze-7-10 emva kwesazi yokuqala. Emva kweeveki ze-4-6, abaninzi abasebenzisi abaqeqeshe amandla baya kuthi bathe kakhulu, okanye badlule, iirekhodi zabo kwiimpahla zabo. Ukongezelela koko, zixela izihlunu zibe nzima, iimpompi ezinkulu ngexesha loqeqesho lwabo, kunye nokuxhatshazwa.
Ngokubhekiselele kwimiba yokunyamezela yoqeqesho, i-trendione yinto ephosakeleyo, njengoko iya kukukhubaza iinjongo zakho zokunyamezela.
Ngaphandle kwezibonelelo ezifanayo, amalungu omzimba ahamba noPernavar powder ngokufanelekileyo ngokubhekiselele kwi-dosing. Yiza ukucinga ngako. Kutheni ungena kwilahleko yokujova xa usenokuthatha into efanayo ngomlomo? Inokusetyenziswa kwakhona njengeprohormone emeleyo okanye inxalenye yecingo.
Le prohormone yiyona kuphela yinkomfa eqinisekisiweyo eguqulwa ibe yiTrenbolone xa isetyenziswe ngumzimba. Ngoku ngelixa kukho inani le-Trenavar "i-clones" engafumanekayo enokuyifumana yona, ngokuqinisekileyo iguqulela kwi-dienolone, enobuthakathaka xa kuthelekiswa.
I-Trenavar powder ixhaphake kwaye ixhaphake ngokuqhelekileyo ngamalungu omzimba ngexesha lokuncintisana kunye nonyaka. Abasebenzisi abaninzi abanolwazi lwaloo prohormone ingxelo yokuba eli qela likwazi ukugcina, kodwa uphinde upake umthamo obuninzi ngexesha la maxesha xa kudibene ne-calorie ephantsi.
Ukongezelela, i-Trenavar powder eluhlaza ayiguquki kwi-estrogen kwaye ayiyi kubangela nayiphi na imiphumo ye-estrogenic xa ibhasi. Nangona kunjalo, kubalulekile ukuba ufumane unyango olufanelekileyo lwe-post okanye i-PCT ehamba emva kokuhamba ngebhayisikili kunye nale prohormone ukuvala yonke imiphumo emibi.
Ngoku ngoxa u-Trenavar powder oluhlaza ungaguquki kwi-estrogen kwaye akuyi kubangela iziphumo zecala le-estrogenic, kubaluleke kakhulu ukuba ufumane unyango olufanelekileyo lwe-post okanye i-PCT ehamba emva kwebhayisikili kule prohormone. Ekubeni i-Trenavar powder iyinamandla kakhulu, uya kufuna i-PCT ukunceda amalungu akho abuyele emva kokucubungula le prohormone kwaye akhuthaze ukuhamba kwamazinga akho e-hormone.
Trenavar powder oluhlaza
Ukubonelelwa kwikamva elizayo.RU-2065
Ngaba u-Trenavar powder Unayo nayiphi na imiphumo yangaphandle
Ukufana naluphi na umjikelezo weprohormone, abasebenzisi babone ukwanda kwexinzelelo lwegazi kunye ne-cholesterol ephakamileyo xa uhamba ngebhayisikili iTransvar powder. Kwiimeko ezininzi i-high blood pressure ephezulu iphela emva kokuba umjikelezo uphelele kwaye imiphumo yesibindi ingahlawuliswa ngokufanelekileyo kwi-support support and Post Cycle Treatment. I-Trenavar powder inokunyusa ukwanda kunye nokunciphisa i-libido okwesikhashana. Iindaba ezilungileyo kukuba iTrnavar powder eluhlaza ayinakucala i-aromatize ithetha ukuba ayiyi kuguqula kwi-Estrogen. Ngoko akufanele ukhathazeke ngokuphuhlisa i-Gyno aka Man boobs.
I-Trenavar powder iya kunciphisa izinga lakho le-thyroid elibangela ukuveliswa kweprolactin. Ukuveliswa kweprolactin ngokugqithiseleyo kunokukhokelela ekuveleleni, ukukhukhumeza, kunye ne-lactation kwindawo yengono. Ukuthintela olu hlobo lwemiphumo emibi, sebenzisa i-Prolactin inhibiter ngexesha lakho lokujikeleza njenge-Inhibit-P nge-SNS okanye iPlactrone ngo-Black Lion Research.
Abo bajwayelene ne "Tren Cough" akufanele bakhathazeke malunga nokuba xa uhamba ngebhayisikili i-Trenavar powder eluhlaza njengokuba kuphela umphumo wegalelo weejectables. Oku akusekho nkxalabo njengoTrnavar iimveliso zepowder eluhlaza zithathwa ngomlomo.
I-Trenavar powder nayo iprohormone engekho i-methylated echaza ukuba ayikho inzima emzimbeni, nangona oku akuthethi ukuba akufanele uthabathe inkxaso. Ukuxhaswa kwe-Cycle kuyimfuneko naluphi na umjikelezo weprohormone.
Ngakolunye uhlangothi, ezi ziphumo zecala zilandelayo zibikwa ngabasebenzisi abesele bahamba ngebhayisikili kunye neTrnavar powder oluhlaza:
Ingabangela intloko kunye nobuhlungu emilenzeni
Iyanciphisa amanqanaba e-thyroid
Ingabangela ukudibanisa kumanqanaba eshukela egazi
Iyanciphisa amanqanaba okunyamezela
Ingabangela i-surges kwi-cholesterol embi kunye namanqanaba egazi
Unokubeka ingxaki entliziyweni nasesibindi
Unokubangela ukungazinzi, ukukhathala nokunyaniseka
Nangona kukho ezinye iingxelo ezigxininisa i-Trenavar powder zingabangela "ukukhwehlela kwe-Tren," akuyona into ongayisebenzisa xa usebenzisa le prohormone. Unokufumana okufanayo xa usebenzisa i-Trenbolone engenayo
Indlela yokuthenga i-Trenavar powder evela kwi-AASraw